Dhagax dixeed oo ku dhawaaqay Dhacdada 24-ka May | Wararka IPhone
Dhagax dixeed wuxuu ku dhawaaqay Dhacdada 24-ka May
Pebble wuxuu ka mid ahaa wax soo saarayaashii ugu horreeyay ee soo saara taleefanka casriga ee run ahaantii noqon kara wax faa'iido leh, maaddaama ay noo oggolaatay inaan la jaanqaadno taleefannadeenna casriga ah si aan uga helno ogeysiisyada curcurka annaga oo aan taleefanka ka bixin mar kasta oo uu dhacayo. Xaddidaadyo ay soo rogtay Apple darteed, Dhagax dixeed wuxuu had iyo jeer ahaa mid aad u xadidan nidaamka deegaanka ee iOS, maadaama aanan la macaamili karin taleefanka labada jiho, marka laga reebo kontoroolka muusikada, si aan uga jawaab celinno fariimaha qoraalka ah, emayllada ... haddii aan JAILBILB ku xirnayn iPhone-keena.
Daahfurka Apple Watch ayaa waxyeelo badan geysatay, waxyaabo sida ay yihiin iyo inbadan ayaa ah isticmaaleyaashii ka tegey Dhagax dixeed khaanad si ay u aadaan Apple Watch halkaas oo isdhexgalka labada jiho uu yahay wadar. Xitaa sidaas oo ay tahay, shirkaddu waxay sii wadaysaa inay suuqyada ku soo bandhigto moodallo leh nashqado cusub, shaashado midab leh, shaqooyin cusub ... laakiin waxay sii wadaan inay la kulmaan isla xaddidnaanta isdhexgalka, in kastoo qaar ka mid ah hawlwadeennada Mareykanka ay macquul tahay in laga jawaabo sms marka uu Dhagaxku isku xirmayo Iphone.
Markii ku dhowaad 8 bilood ay dhaaftay tan iyo markii la soo saaray qaabkeedii ugu dambeeyay, Pebble Time Round, shirkaddu waxay hadda ku dhawaaqday in berri aan la yeelanno ballan cusub, 10-ka subaxnimo waqtiga bariga. Waqtigaan la joogo ma ogin waxa ay shirkaddu rabto inay na soo bandhigto, moodel cusub oo hawlo badan qabta, xargo leh hawlo GPS ah ... ama laga yaabee inay u dhaqaaqdo shaashadaha LCD, inkasta oo ay dhagxaan ku ridi doonto saqafkeeda, maadaama ay had iyo jeer wuxuu ku faanaa nolosha batteriga qalabkaaga markaad isticmaaleyso e-ink. Actualidad iPhone-ka waxaan kula socon doonnaa dhammaan wararka ay shirkaddu soo bandhigayso berri si ay si dhakhso leh kuugu soo wargeliyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dhagax dixeed wuxuu ku dhawaaqay Dhacdada 24-ka May
Apple waxay dooneysaa ku dhowaad 80 milyan oo iPhone 7s ah oo la sameeyo dhamaadka sanadka
Spotify waxay bilaabeysaa qorshe qoyskeeda u gaar ah € 14,99 / bishii, waa isku qiimo Apple Music